जाडोमा ब्लडप्रेसर बढेको छ ? समयमै जाँच गर्नुस्, नत्र ज्यानै जाला - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
चिकित्सकका अनुसार रक्तचाप जति बढ्यो मुटुका धमनी पनि बिगँ्रदै जान्छ । मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रेमराज वैद्यले जाडो भएपछि चिल्लो र गुलियो बढी खाँदा सुगर र कोलेस्ट्रोल बढेर हृदयाघात हुने सम्भावना रहने बताए ।
चिकित्सकका अनुसार चिसोबाट जोगिनु नै यसबाट बच्ने उत्तम उपाय हो । विदेशमा गरिएका केही अध्ययनले गर्मीभन्दा जाडोमा समग्रमा हर्टअट्याकको घटना ५० प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ । यस्तै, चिसोको समयमा गुलियो र बढी चिल्लो खाँदा सुगर, कोलेस्ट्रोल भई त्यसले हर्टअट्याकसमेत हुन सक्छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
अनुशन्धान विभागका अधिकृत नै भ्रस्टाचार गर्दा गर्दै रंगेहात पक्राउ
भदौ ४, काठमाडौं - हाम्रो देश भ्रष्टाचारको दल दल मा यसरी फसिसक्यो कि अब त भ्रस्टाचार र अन्य अपराध अनुशन्धान […]
निर्मला पन्त प्रकरण : छानबिन समितिले सूचीसहित प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझायो
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका आशंकितहरुको सूचीसहितको विस्तृत […]
साउन २८, काठमाडौैैँ । नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए मोबाइल सेवाका ग्राहकलाई नयाँ वर्ष २०७४ तथा अन्य […]
एजेन्सी । सेतो रंगको टल्किने सूट र अन्तरिक्ष यात्रीको जस्तै हेल्मेट लगाएका दुई बाबु छोराले आफुलाई […]